Mety ve ny mifampijery sy mifampisava finday ?
Isaky ny zoma dia omena sehatra ahafahany maneho hevitra ato anatin’ny Jejoo ny lehilahy. Loha-hevitra amin’ity zoma ity indray ny hoe :
Mety ve ny mifampijery sy mifampisava ny finday ho an’ny mpivady na mpifankatia ? satria nahoana ?
Mamaly izy ireo
Besoa Nirina : Rehefa samy mifampatoky tsara dia aza misavasava hafatra na sary amin’ny finday na solosaina izany! Mety ho "secret professionnel" no voatahiry ao ka tsy voatery hambara amin’ny vady andefimandry ! Rehefa tsy manao any am-badika any dia samy tsy ho saro-piaro tafahoatra! Ny manao ihany manko no miaro be loatra!
Harry Lalah : Salama tompoko, raha ny hevitro dia tsy mety ny mifampisavasava finday eny fa na paosy sy porte feuille aza. Ny antony dia :
1°) Fanehoana tsy fatokisana eo amin’ny an-daniny sy ny an-kilany izany.
2°) Miteraka ady izany ary mety hiafara amin’ny fisarahana raha sanatria ka manao zavatra mifanohitra amin’ny fiainana mpivady no hita ao am finday na any am-paosy. Ny iray amin’izy roa nefa mety milamina foana hatramin’izay. Toro-hevitra : aleo mampiseho fitiavana raha mieritreritra ianao fa manana mpifaninana aminao any ivelany, karakaraina tondrahana isan’andro dia mitombo maniry tsara ny fitiavana.
Njaka : Tsy misy blabla sy satria … Tsy mety izany mifampisavasava izany. Resaka fifanajana fotsiny dia fifampitokisana. Na mety na tsy mety dia tsy mijery raha izaho manokana!!!
Lova : Ny misava sy ny mijery samy hafa ... "mijery" midika fahadiovam-po ary ny "misava" midika tsy fifampitokisana ... Zah alou tsy misava ... Mitarika asa loha fotsiny.
Miatrika : Tsy mety ilay misava satria misy resaka tsy ho zakan'ny vehivavy ataon'ny lehilahy dia torak'izay koa ny vehivavy.
Tahiry : Tsy mety..fa raha misy zavatra tena mampiahiahy itadiavana porofo dia mety. Misy mantsy ny hoe ahiahy mitombina sy ny ahiahy tsy mitombina eeeee...Fa izaho manokana, “par pure question d'éthique”, tsy mijery ny ao anatin'ny telephone an'olona izany na iza io na iza..raah tsy hoe : ilay olona no miteny hoe mba jereo kely hoe : ity.